Nchekwa maka Workflows nke igwe ojii | NAB Show News | 2020 NAB Show Onye Mmekọ Media na Onye Mmepụta NAB Show LIVE. Akụkọ Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi
NAB Show News | 2020 NAB Show Onye Mmekọ Media na Onye Mmepụta NAB Show LIVE. News Broadcast Engineering News 2020 NAB Show News: Live Streaming, Podcasting, Broadcast Engineering, TV & Radio Technology na Post Production News. NAB Gosi 2020.
PHABRIX gafere ST 2110 na AMWA NMOS TR-1001-1 JT-NM ule
Hospitallọ ọgwụ Baltimore ruru ndị ọrụ Ahụike Ahụike Site na Teradek gụgharia Live
AJA na-ekwupụta Ki Pro Ultra 12G
International Hockey Federation (FIH) na NAGRA bịanyere aka na nkwekọrịta afọ iri iji wepụta egwuregwu na-agbanwe ahụmịhe dijitalụ nke ndị na-akwado ya.
DejaSoft weputara DejaEdit Version 3 -
Mediacorp Singapore na-abịanụ 'Ihe matesmụ klas' Shot na Echo Ntụrụndụ Ejiri Ntụrụndụ URSA Mini Pro na DaVinci Resolve
LTN Global na-ebupụta LTN Wave: ihe ọzọ dabere na IP na nkesa satịlaịtị
Cinegy na-ekwupụta TURBOCUT - Ime Editing na Adobe Premiere Faster karịa Mgbe Ọ bụla
The Switch na-ebupute TV Production TV-nke dị ka ọrụ iji nyefe ụlọ ọrụ mmepụta ihe kachasị agbanwe agbanwe na nke zuru oke
Penny Ihe Ngosipụta nke Oge Egosi: Obodo Angels Na-eweta 1938 Los Angeles na Angeleslọ Ndị Na-ekiri ya na Cooke S4 / i Primes
Broadcast Pix na-ekwupụta ọnọdụ ọfịs ọhụrụ
DezieShare na Adobe jikọrọ aka na-eme ka Nwepụta Nweta Imepụta na Ndebe Na-arụkọ Ọrụ
Nmepụta AY na-atụgharị gaa na Pliant Teknụzụ 'CrewCom maka Oke nke Omume Live Na-ewu ewu
DPA Unveils 4097 Micro Shotgun Microphone na Kit Ajụjụ
Ebe a na-eme nri KitchenFish na FOR-A Video Switcher maka mkpuchi a pụrụ ịdabere na mgbasa ozi lọtrị kwa ụbọchị
Home » Mmepụta Ihe » Nchekwa maka Workflows nke sitere na igwe ojii
Nchekwa maka Workflows nke sitere na igwe ojii
Ihe ntiwapụ nke COVID-19 mere ka akagbuo afọ 2020 NAB egosi dị ka ihe omume anụ ahụ na Las Vegas. Kama nke ahụ, ndị na-ere ahịa dị iche iche ga-abụrịrị ihe ngosi ma gosipụta na sistemụ nchekwa dijitalụ na ngwanrọ maka ngwa mgbasa ozi na ihe ntụrụndụ dị iche iche kwagara na Omume Virtual, na-amalite na mbubreyo Eprel na June June 2020, gụnyere NAB Gosi Kwuputa (nabshow.com/express/).
Site na ịkwaga n'ọrụ dịpụrụ adịpụ nke ọtụtụ ndị ọkachamara na ụlọ ọrụ, usoro ọrụ ndị na-arụ ọrụ igwe ojii abụrụla ihe dị mkpa. Kwarantaini ugbu a emeela ka usoro a dị ugbu a dị ka ọrụ igwe ojii, nke ga-aga n'ihu ọbụlagodi anyị nwere ike ịrụkọ ọrụ ọzọ. Enweghị igwe ojii, ọtụtụ ndị ọrụ M&E ga-anọ n'enweghị ọrụ.
Igwe ojii na-arụ ọrụ igwe ojii na-abawanye na ihe ndị a ma ama ọbụna tupu oria ojoo COVID-19. Na 2020 HPA Retreat, ndị isi ụlọ ọrụ na-enye nhọrọ igwe ojii igwe ojii yana ndị isi nwere ahụike, mepụtara vidiyo na-arụ ọrụ igwe ojii na-ebi ndụ dị mkpirikpi, Lederhosen furu efu.
Na akụkọ m na-eme kwa afọ 2019 na Nchekwa dijitalụ na Media na Ihe Ntụrụndụ, atụpụtara m nnukwu mmụba na nchekwa igwe ojii iji kwado mgbasa ozi na ntụrụndụ (lee n'okpuru.). Na akụkọ nke 2020, uto na nchekwa igwe ojii ga-adị elu karịa n'ihi ịba ụba ojiji mgbe mmalite nke ọrịa ahụ, ma dabere na ahụmịhe ahụ, uto ngwa ngwa na ọrụ dịpụrụ adịpụ na nsogbu ikuku. Ọrịa a jere ozi dị ka ihe ngwangwa nke ojiji igwe ojii.
Isiokwu a na-eleba anya na mmepe maka arụ ọrụ ndị na-arụ ọrụ igwe ojii, na ọkachasị usoro nchekwa dijitalụ iji kwado ọrụ ndị a. Rịba ama na n'agbanyeghị na ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị gosipụtara na N2020 NAB na-ekere òkè na ihe omume mepere emepe, a na-agbasa ihe omume ndị a ka oge na-aga, site na Eprel ruo June 2020. Aga m ekwu okwu n'isiokwu a banyere ihe ndị m chọpụtara banyere oge edere. .
Ọrụ ntanetị Amazon (AWS) nwere ya NAB mepere ememme, na-elekwasị anya na nrụpụta ọrụ dịpụrụ adịpụ site na okike ọdịnaya yana nrụpụta post site na nkesa.
Ọtụtụ ụlọ ọrụ M&E ejirila ọrụ AWS gụnyere Turner, Untold, Rock na Roll Hall of Fame, Fox, HBO, Hotstar na Eurosport. AWS bụ otu n'ime ụlọ ọrụ 5 nyere onyinye Injinia EMMY maka igwe ojii na-eweta igwe ojii maka inyefe ọdịnaya, njikwa na nnyefe.
AWS na-enye ọrụ atọ ọhụrụ iji nyere aka na nrụpụta ọrụ mgbasa ozi na-adịghị mkpa. Ndị a bụ mpaghara mpaghara AWS, Mpụga AWS na AWS Wavelength. Mpaghara mpaghara na-enye ikike adịghị ala site na ịbịaru nso na ndị ọrụ njedebe gị na ọrụ AWS. Ebupute AWS na-eweta ọrịre nke ngwaahịa AWS n'ime ebe data gị maka ahụmịhe igwe ojii na ngwakọ ma ọ bụ igwe ojii. Mgbasa ozi AWS na-enyere ndi mmepe ngwanrọ eji aka ike weputa ngwa site na iji ọnụọgụ abụọ.
AWS na-enye arụmọrụ arụmọrụ mebere maka Windows ma ọ bụ Linux nke gụnyere ịnweta NVIDIA T4 Tensor Core CPUs na NVIDIA Quadro workst n'otu ụgwọ. Ọ na-enye nsụgharị na AWS ma dị ka ngwakọ ma ọ bụ igwe ojii zuru ezu site na iji AWS Thinkbox Deadline ma ọ bụ usoro njikwa njikwa inye gị kacha amasị. A na-enye ngwaahịa abụọ maka ịkwụ ụgwọ ka ị na-eji ya.
Na 2019 Fox kwuru na ọ ga-eji AWS maka eriri na satellite mgbasa ozi na-eji AWS Mpepụta na ụfọdụ ụlọ ọrụ mmepụta ya yana mpaghara mpaghara AWS. Ihe onyonyo a dị n'okpuru na-egosi ihe ọdịnihu nke agbasa ozi n'igwe site na iji AWS nwere ike ile anya ka ime ụlọ na-ahụ maka mmepụta na-abanye n'igwe ojii.
AWS kwurịtara nkesa nkesa ọdịnaya dị ala site na AWS Elemental MediaStore (nchekwa mgbasa ozi kachasị na ntanetị). Maka NAB 2020 AWS nyere nnyefe Elemental Live chunked, nkwado DRM na ntinye Ad Mgbakwunye n'akụkụ. Companylọ ọrụ ahụ kwukwara na Elemental MediaConvert na Accelerated Transcoding nwere ike ime ka nhazi AV1 dịkwuo mfe taa. Ihe ogugu a n’okpuru gosiri otu AWS Elemental MediaLive, igbe ntanetị n’ime igbe ntanetị, nwere ike ịnye vidiyo dị ndụ.
Njirimara na-enye nchekwa nchekwa ngwakọ ngwakọ na ọrụ data yana onyinye ụfọdụ vidiyo nke NAB. Industrylọ ọrụ M&E abụwo otu n'ime Njirimaraahịa ebumnuche. Companylọ ọrụ ahụ kwupụtara na Adobe Premiere Pro na After Afterffe, na tandem with NjirimaraỌrụ faịlụ, mee ka ndị otu okike mepụta ma dezie ihe nkiri vidiyo site na iji nchekwa igwe ojii na otu ọkwa arụmọrụ, ohere na arụmọrụ dị ka ụlọ ọrụ na studio. NjirimaraCloudStudio na-enye ohere ka a na-ebugharị ọrụ ndị na-eme ngagharị ngagharị n'ụzọ ọdịnala na igwe ojii maka ọha mmadụ na nyiwe AWS na GCP.
Na nkenke maka ndị nyocha Njirimara kwurịtara karịa Njirimara, Adobe na Teradici nwere ike inye ndozi igwe ojii na-arụ ọrụ nhazi dịka egosiri na foto dị n'okpuru. Nchikota a nwere ike inye nzacha na-enweghị njedebe, ntinye vidiyo na-arụkọ ọrụ ọnụ dị elu, nsonaazụ anya na ntughari na nyocha na visibilụ Njirimara ngwaọrụ nyocha.
Ọ bụ ekwuputara nkwalite ya na sistemụ StorNext ya na ngwanrọ njikwa data nke emere iji mee ka igwe ojii nwee ohere ịnweta ngwa ngwa, na-agụ nke ọma ma na-ede ọsọ ọfụma maka ụlọ ahịa igwe ojii na ihe. Ihe ohuru ohuru nke StorNext 6.4 nyere aka mee ka igwe ojii di iche-iche na otutu igwe eji igwe-oji mee ihe, na-enye nzigbu di uku ma nwekwaa onyonyo na gburugburu ya.
StorNext 6.4 na-etinye ihe na-akọwa onwe ya iji mee ka ọdịnaya igwe ojii dị mfe ịnweta, na-eme ka arụ ọrụ igwe ojii na-arụ ọrụ ọhụụ. Onye ahịa ahụ na-ede faịlụ n'ime sistemụ faịlụ StorNext, wee dabere na iwu, StorNext na-edegharị faịlụ na igwe ojii ma ọ bụ nkeonwe, yana nhọrọ ịgụnye metadata ihe ọzọ. Ndị na-abụghị StorNext ndị ahịa na usoro ndị bi na ígwé ojii nwere ike ịnweta ihe ugbu a ozugbo, na-enyefe usoro metadata ọhụrụ agbatịla. Na mgbakwunye, StorNext 6.4's Multi-threaded put / enweta arụmọrụ na-enye nkwalite 5X ka 7X karịa otu arụkọtara ọnụ.
NetApp na-eme nke ya foju NAB omume na June 2. Ihe omume ha ga - egosiputa azịza ha, ya na ndị mmekọ ga - enye ọkwa na arụmọrụ ọhụụ yana arụmọrụ ma mepụta data mgbasa ozi na - akwado ọrụ M&E.
Dell Teknụzụ nwekwara ihe omume mepere emepe nke gosipụtara komputa ha na akụrụngwa nchekwa ha maka mgbasa ozi na usoro ntụrụndụ yana ngosipụta nke Adobe na nchekwa Dell Isilon maka ime ka ọrụ mmezi. Igwe vidiyo ha na-acho kwuru banyere mkpa ọ dị ịnweta metadata na otu onye ọkachamara Adobe kwuru banyere etu Dell Isilon si nye aka na Mmepụta Adobe (akụkụ nke Premiere). Rịba ama na na 2020 ụlọ ọrụ ahụ nwere atụmatụ maka sava Isilon na ikpo okwu igwe ojii na OneFS.Next. Companylọ ọrụ ahụ kwuru na Eprel na-atụ anya inwe ike ikwu karịa n'ime ọnwa ole na ole.
Dell nwekwara slide na-ekwu maka atụmatụ mbụ data ha. Nke a bụ atụmatụ zuru oke ịmegharị data n'etiti igwe ojii, nkeonwe, igwe ojii na igwe ojii.
Dell na-arụ nnukwu ọrụ na sistemụ arụmọrụ IP (SMPTE 2110) tinyere ngwaahịa ya. N’otu n’ime ihe ndekọ ndekọ ha, otu ọkachamara si IABM rụtụrụ aka na ndị ọrụ M&E agbanweela n'iji ebe a na-edebe akwụkwọ maka ọ bịara sie ike ịnweta ndị na-eme ihe nkiri. Dell na Greymeta na - arụ ọrụ iji mee ka ọ dịrị mfe ịnweta data echekwara site na AI mepụtara metadata site na iji usoro ikpo okwu Iris ha. N'okpuru ebe a, enwere nkọwa site na ngosipụta ha na ntanetị nke bụ echiche dị elu nke ikpo okwu nchekwa Dell na atụmatụ ngwanrọ.
uchu nyere ihe ntanetị maka ịme M&E na-arụ ọrụ remotely. Marquis Broadcast na-enye ndị ọrụ ọrụ dịpụrụ adịpụ ikpokọta uchu Nchekwa Nexis nwere nchekwa igwe ojii wasabi (maka nkwado ndabere) yana ọrụ mmekorita.
Ejiri Spectra Logic nke ọma na ụlọ ọrụ M&E dịka onye na-eweta ebe nchekwa. Mgbe ha ihe ngosi NAB mebere ha na egosiputa uzo eji eme ihe maka uzo uzo BlackPearl ihe ha na echekwa. BlackPearl bụ ntọala nke sistemụ nchekwa nchekwa nke Spectra nke gụnyere njikọta na igwe ojii na igwe ojii, nchekwa ọtụtụ ebe yana nchekwa nchekwa ihe.
Riobroker, ewepụtara ya na NAB 2019 bụ igwe na-agagharị agagharị na engine njikọ. Nke a na-enye ohere ịtinye metadata na ntanye ederede na ọdịnaya ma na-enye igwe ejiji ọpụpụ na Black Pearl na mgbake faịlụ nwere akụkụ. Nke a gụnyere ngagharị nke data gaa ma ọ bụ site n'igwe ojii. Enwere ike ịgbakwunye nodes RioBroker ka iwelie nnweta na ike yana oghere aha ụwa. Spectra's StorCycle na-enye ohere nchịkwa nke njikwa akụ gị niile ejikọtara.
Wasabi emeela M&E otu n'ime ahịa ya lekwasịrị anya maka nchekwa ụlọ ọrụ igwe ojii. Companylọ ọrụ ahụ na ọtụtụ ndị otu ọwa na-arụ ọrụ iji wepụta nchekwa igwe ojii dịka akụkụ nke ọrụ ha. Companylọ ọrụ ahụ kwuru na 3 ọ bụlard ngwa AWS S3-dakọtara ma ọ bụ ikpo okwu kwesịrị ịrụ ọrụ na nchekwa Wasabi. Companylọ ọrụ ahụ na-ekwu na ngwa 200+ ka edepụtara ka Wasabi nwere ike ịhazi ọnụ dị ka egosiri n'okpuru. Companylọ ọrụ ahụ na-ekwu na ojiji ya nke sistemụ ihe eji eme ihe ugbu a na-eji teknụzụ ngwaike na-eweta nnukwu nchekwa.
Companylọ ọrụ ahụ nwere otu igbe nke nchekwa arụmọrụ dị elu maka $ 5.99 / TB / mo na-enweghị ego egoghị ego na enweghị ụgwọ maka oku API. Na 2020 Wasabi nyere nchekwa ịkwụ ụgwọ dịka ị na-aga na $ 5.99 kwa ọnwa ma ọ bụ ikike echekwara site na 50 TB gaa na 10 PB na ntanetị kapịrị ọnụ karịa 1,3 ma ọ bụ afọ 5 na-akwụ ụgwọ n'ihu. Companylọ ọrụ ahụ kwuru na nchekwa ya nwere ntụkwasị obi yana nnukwu nrụpụta yana ịdịnyere yana gụnyere Motion Picture Association of America.
Wasabi nwere ebe a na-arụkọ ọrụ na 1 Wilshire na LA nwere ngwa mbufe TB Wasabi Ball nke 100 maka ihe dị mfe maka nnukwu ọdịnaya. Thelọ ọrụ ahụ nwekwara nchekwa na US East Coast yana Europe (Amsterdam) na Asia (Japan). Na mgbakwunye Wasabi emeghela njikọ njikọ ntanetị nke 1 na 10 GbE na nchekwa igwe ojii ha.
Nchịkọta azụ, ụlọ ọrụ nchekwa igwe ojii dị ọnụ ala nke na-echekwa ohere M&E, kwupụtara na ọ na-akwado ugbua nnukwu ihe nchekwa S3 site na mwepụta nke API ọhụrụ, S3 dakọtara.
Nke a pụtara na ndị na-emepụta ọdịnaya nwere ike ịpụ na ndị na-ere nchekwa igwe ojii ndị ọzọ na nchekwa azụ Cloudblaze dị ọnụ ala. Nkwado BackBlaze bụ IBM Aspera na-akwado maka ịnyefe data ọsọ ọsọ na ntanetị gafere tere aka na Ọ bụ na-arụ ọrụ na Backblaze maka ijide, ịmepụta na ịkekọrịta ọdịnaya dijitalụ. N'oge na-adịbeghị anya Backblaze kwuru na ha nwere ihe karịrị Exabyte nchekwa na igwe ojii ha.
Ihe Nzube na-enye ihe nchekwa maka ngwa mgbasa ozi na ihe ntụrụndụ. Companylọ ọrụ ahụ na-ekwu na "Ebumnuche Matrix na-elekwasị anya n'inye azịza nke na-enyere ndị okike aka na ndị na-emepụta ihe iji nyere onwe ha aka inweta ọdịnaya site na ọrụ ma ọ bụ n'ebe ọ bụla." Ọ na-akwalite nnweta iji aka gị nye ọdịnaya site na onodu ihe ndekọ ntanetị iji nyere aka na ọrụ M&E na-arụ ọrụ na imekọ ihe ọnụ.
Editshare mere usoro mgbasa ozi nke sistemụ na-efe efe n'ime obodo n'efu ruo July 1st iji nyere ndị ọkachamara aka na-arụ ọrụ n'ụlọ. Companylọ ọrụ ahụ nwere nnukwu elekwasị anya na ịnye mgbakwunye gbagoro maka mmepụta vidiyo na igwe ojii na 2020 NAB. Nke a gụnyere teknụzụ EFS na Flow ọhụụ iji kwado mmepụta njedebe na njedebe na igwe ojii na ntinye miri emi na ngwaọrụ okike dịka Adobe Premiere Pro maka mmegharị arụmọrụ yana ngwa bara uru nke AI iji mee ka akụ na ụba sie ike. EFSv bụ usoro ọhụụ na-enye ndozi vidiyo na nchekwa zuru oke nke ụlọ ọrụ ahụ na-ekwu na-enyere ndị ahịa aka ngbanwe kpamkpam na sistemụ arụmọrụ kachasị gaa n'igwe ojii kachasị arụ ọrụ.
Companylọ ọrụ ahụ kwuru na “EFS 2020 ike ngwa ngwa Dezie ya oghere nchekwa na netwọkụ dị na saịtị, igwe ojii na nhazi ngwakọ. Kwekọrịtara nke ọma na F2020 2020, EFS XNUMX na-enyere ndị otu mgbasa ozi aka iru ọtụtụ ọrụ mmekọrịta, na-echebe ndị okike site na njikwa ọrụ dị n'okpuru ebe a na-akwadebe ndị otu ọrụ aka nke usoro njikwa mgbasa ozi.
Scale Logic tụlere NAS nke nwere igwe ojii nwere ike ịrụ ọrụ na nnukwu ngwaọrụ nrụpụta site na iji NVMe ọhụrụ nke NX2 / ZX nke ụlọ ọrụ ahụ na Sync, ndabere na Archive na ọbaakwụkwọ teepu mpaghara ma ọ bụ n'ọ́bá akwụkwọ igwe ojii.
Companieslọ ọrụ ndị ọzọ dị iche iche na-eweta onyinye metụtara igwe ojii gụnyere Masstech na-enye enyemaka maka ịchekwa igwe ojii na nchekwa ọrụ yana na-emegharị ndozi ime. Companylọ ọrụ ahụ kwuru na ngwaahịa a na-eme ka edezi ihe dịpụrụ adịpụ na ihe niile n'otu ngwa maka obere, ọkara na nnukwu mmepụta vidiyo na-arụ ọrụ.
Oria ojoo COVID emeela ka ihe ndi mmadu di nma na mgbasa ozi di anya na ihe ntụrụndụ na-arụ ọrụ, yana imekọ ihe ọnụ na-ejide ndị ọkachamara M&E na ndị were ha n'ọrụ na azụmaahịa. Ngwa ahịa ebe nchekwa na-agaghị apụ ma enwere nnukwu mkpa ịkekọrịta ma nyochaa ọdịnaya iji mee ka ọrụ ọrụ dịpụrụ adịpụ. Ngwá ọrụ igwe ojii ga-aghọ akụkụ dị mkpa nke ọrụ mgbasa ozi n'ọdịnihu, na-abawanye ojiji nke ngwakọ na nchekwa igwe ojii.
Tom Coughlin, Onye isi ala, Coughlin Associates bụ onye nyocha nchekwa dijitalụ na onye na-ahụ maka azụmahịa na teknụzụ. O nwere ihe karịrị afọ 39 na ụlọ ọrụ nchekwa data yana ọrụ injinia na njikwa n'ọtụtụ ụlọ ọrụ. Coughlin jikọtara ọnụ, na-ebipụta akwụkwọ na akụkọ na teknụzụ na teknụzụ ma na-etinye ihe mmemme echekwara dijitalụ. Ọ bụ onye na-echekwa ihe mgbe niile na ebe nchekwa na forbes.com na ebe nrụọrụ weebụ M&E. Ọ bụ onye otu IEEE, onye bụbu Onye isi ala nke IEEE-USA ma na-arụ ọrụ na SNIA na SMPTE. Maka inweta nkọwa ndi ozo banyere Tom Coughlin yana mbipụta ya na ihe omume ya www.tomcoughlin.com.
 Nchekwa Digital Digital na Media na Ntụrụndụ Report, Coughlin Associates, 2019, tomcoughlin.com/product/digital-storage-for-media-and-ente metụtara-report/
PSSI Injinia nke Ọma n’igwe n’iru Nbufe nnyefe nke American Idol Finale - May 20, 2020
Nchekwa maka Workflows nke sitere na igwe ojii - May 20, 2020
Ngwurugwu na-enuba Global: Ewelite ebe ndị ọzọ na-eme mkpọda nke Lower Delay, Higher Scale, na TCO dị ala - May 15, 2020
Previous: Netiwube TVU na - esonye na Nweta Inye Nkwado Ndụ Nke kacha nke Mmepe Ihe Nkwalite Azụmaahịa Mere Akụkọ site n’aka US Space Agency.
Osote: PSSI Injinia nke Ọma n’igwe n’iru Nbufe nnyefe nke American Idol Finale
DekTec's New Quad 3G-SDI / ASI PCIe Kaadị Nwere Ike stmalite Mmepụta vidiyo na Nkesa Maka Ndị Mgbasa Ozi
Draco vario ultra HDMI 2.0 Na -eweta Nkesa vidiyo dị elu
PSSI Injinia nke Ọma n’igwe n’iru Nbufe nnyefe nke American Idol Finale
Igwefoto igwefoto ohuru nke B & H na-eme ihe osise
Ngwurugwu na-enuba Global: Ewelite ebe ndị ọzọ na-eme mkpọda nke Lower Delay, Higher Scale, na TCO dị ala
Adder Technology's ADDERLink ọhụrụ nke F INFINITY 3000 na-enye ndi Mgbasa Ozi Ogbe
NAB Leadership Foundation na-akpọsa ọrụ 2020 na America Awards Finalists
Akaebe nke Curtis LeGeyt na Senate IP Subcommittee Nkwupụta gbasara Digital Millennium Copyright Act
NAB họpụtara mmadụ atọ nye ndị isi nduzi redio
NAB Show Express Na-enweta Mkpakọrịta dị elu na 40,000 ndị bịaranụ n'ụwa niile
Nkwupụta NAB na Mpụga ụlọ nke Iwu HEROES
Nkwupụta NAB na Houselọ Maka Okwu Mmeghe nke Iwu Expgbasawanye Itoto na Mgbakọ mgbasa ozi mpaghara maka Mmemme Nchedo Paycheck
Iwu nnwere onwe nke redio na-agbakwunye ndị nnọchianya isii na Houselọ, abụọ na Senate
2020 NAB Crystal Radio Awards Imeri Ndị Nwetara
Gordon Smith Keynote na 2020 NAB Show Express
Nkwupụta NAB na Senate maka iwebata iwu nke na-agbasawanye iru eru na mpaghara mgbasa ozi mpaghara maka Mmemme Nchedo Paycheck
Mkpesa Akaụntụ Mita Media
Onye Ọkachamara / Onye Na-ahụ Maka Nhazi
Onye na-arụ ọrụ na Drone
Nchịkọta Ngwaahịa Ntanetị
Sinima 4D Artist
Mgbasa Ozi Bekee bụ Onye Ọhụụ Live Streaming Emepụtara NAB Gosi Ndụ na 2020 NAB Gosi na Las Vegas. Anyị na-ejikwa ndị NAB Gosi Podcast Studio na NAB Gosi.
Copyright 2020 Broadcast Beat Magazine, LLC. Ikike niile echekwabara. Marksghala ahia na nwebisiinka niile na-egosi ebe a bu ihe ndi nwe ha.